आज राती यूरो युद्ध, जर्मन vs पोर्चुगल, फ्रान्सको पनि खेल। कस्को सम्भावना कती? | Rochak
आज राती यूरो युद्ध, जर्मन vs पोर्चुगल, फ्रान्सको पनि खेल। कस्को सम्भावना कती?
June 19, 2021 June 19, 2021 NepstokLeaveaComment on आज राती यूरो युद्ध, जर्मन vs पोर्चुगल, फ्रान्सको पनि खेल। कस्को सम्भावना कती?
आजको यूरोकप निकै रोमाञ्चक र घमासान हुने वाला छ। यूरोकप २०२० समूह एफ् मा निकै बलिया टिम छन् ।निकै गाह्रो समूहको रुपमा लिईएको समूहमा पछिल्लो यूरोकपको बिजेता पोर्चुगल, पछिल्लो विश्वकप बिजेता फ्रान्स र २०१४ को विश्व बिजेता तथा यूरोकपको सर्वाधिक सफल टोली जर्मन छन्।भने अर्को टोली हङ्गेरी पनि उक्त समूहमा छ। हरेक समूह बाट पहिलो र दोस्रो स्थानको टोली सिधै अन्तिम १६ मा छनोट हुने सिस्टम हुन्छ।भने उत्कृष्ट तेस्रो हुने बाट ४ टिम पनी अन्तिम १६ मा छनोट हुन्छन्। यसरी शिर्ष २ मा रहेर नकआउट चरण प्रबेशको लागी यस समूहमा निकै प्रतिस्पर्धा देख्न सकिन्छ।
आज तेहि ग्रुप अफ डेथ मानिको समूहका खेल हुदै छन्।यसअगिको खेलमा पोर्चुगलले हङ्गेरी लाई ३:० र फ्रान्सले जर्मनलाई १:० ले हराएर ३/३ अङ्क जोडेका छन् । जर्मन र हङ्गेरी अङ्क बिहिन छन्।आज पनि जर्मनले हार्यो भने उस्लाई अगिल्लो चरणको यात्रा कठिन बन्न सक्छ। यस हिसावले जर्मन निकै दबावमा रहन सक्छ ।
तुलनात्मक रूपमा फ्रान्सलाई अल्लि सहज छ।फ्रान्स र हङ्गेरी को खेल साँझ ६:४५ मा छ। जुन खेल जित्दै फ्रान्सले महत्वपूर्ण ६ अङ्क जोड्दै आजै नकआउट चरण प्रबेश गर्ने बलियो सम्भावना छ।
जर्मन र पोर्चुगल बिचको खेल राती ९:४५ मा जर्मनको म्यूनिक सहरमा हुदै छ।जर्मन र पोर्चुगल बिच भएको पछिल्लो ५ भेटमा जर्मन ले ४ खेल जितेको छ भने पोर्चुगलले १ खेलमात्र जितेको छ। तेस्तै जर्मनको पछिल्लो ५ खेलको रेकडमा २ मा हार,२ मा जित र १ खेल बराबरी खेलेको छ।पोर्चुगलले पछिल्लो ५ खेलमा ३ जित र २ बराबरी खेलेको छ।
जर्मनको बल पोजिशन राम्रो छ।आज पनि राम्रो बल पोजिशन बनाऊदै आक्रमण गर्न सक्छ।पछिल्लो खेलको कुरा गर्दा पोर्चुगलले अपेक्षा अनुसार खेल्न सकेन।नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेपनि, ८३ मिनेटसम्म पोर्चुगल निकै तनावमा देखिन्थो । राम्रो खेलिरहेको थिएन । जहाँ उस्ले २ पेनाल्टीको मद्दतमा ३ गोल निकाल्यो। पोर्चुगलले अस्तिको भन्दा खेल नसुधारेमा उस्लाई गारो पर्न सक्छ। उता जर्मनको कुरा गर्दा फ्रान्स जस्तो टिम सङ्ग पनि राम्रो खेल्दै थियो अझ भनौ फ्रान्सको भन्दा खेल राम्रो थियो।बल पोजिसन देखि आक्रमण सम्म पनि फ्रान्सले भन्दा धेरै गर्दै थियो। जुन खेल जर्मनले आत्मघाती गोलको कारण हार्न पुग्यो।
यसरी पछिल्लो खेलमात्र हेर्ने हो भने जर्मनले खेल जित्न सक्छ। तर पोर्चुगलले आफ्ना कम्जोरी सुधार्दै राम्रो खेल्न सक्छ उ सङ्ग पनि बिश्व स्तरका राम्रा खेलाडी छन्।पोर्चुगल सङ्ग रोनाल्डो, बर्नाल्डो सिल्भा, फर्नान्डेज जस्ता राम्रा खेलाडीको साथ छ। जर्मनलाई पनि टोनि क्रुस,थोमस मुलर्र, म्यानुयल निऊर, गुन्दोगन,ज्ञ्यानबेरी लगाएतको साथ छ।
यसरी हेर्दा खेल केहिहद सम्म जर्मनले राम्रो खेल्न सक्छ।पोर्चुगल को पनि राम्रो सम्भावना छ।अझ बढी सम्भावना बराबरी को छ। सबै भन्दा बढी सम्भावना जर्मनको छ।
अब म’रेका मान्छेलाई पनि पुनः जि’उँदो बनाउन सकिने डाक्टरको दाबी (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
May 11, 2021 May 11, 2021 Nepstok